Mushaarka shaqaalaha iyo saraakiisha dowladda oo la dhimayo (Akhri wax ka bedelka Miisaaniyadda 2015)
Golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya ayaa ansixiyay Axadii 19-kii July 2015 in wax ka bedel lagu sameeyo miisaaniyada 2015 oo hore Baarlamaanku u ansixiyay, iyadoo ladhimayo kharashaadka ku baxa Wasaaradaha, xafiisyada dowladda, mushaarka shaqaalaha rayidka iyo saraakiisha ciidamada.
Wa ka bedelka Miisaaniyadda waxaa golaha wasiirada ka ansixiyay Madaxweyne Xasan Sheekh oo shirka Golaha wasiirada guddoomiyay maalintaasi isagoo culeys ku saaray golaha wasiirada, wuxuuna balan qaaday in miisaaniyadda la bedelay lagu saleeyay dhaqaalaha gudaha oo bil waliba ay mushaar heli doonaan shaqaalaha dowladda iyo ciidamada.
Wax ka bedelka oo u baahan inuu Baarlamaanku ansixiyo wuxuu saameynta ugu weyn ku yeelanayaa shaqaalaha rayidka, xildhibaanada Baarlamaanka ah iyo wasaaradaha iyadoo aan la sheegin wax saameyn ah oo uu ku yeelanayo madaxda sare iyo xafiisyadooda(Madaxtooyada, Baarlamaanka iyo Ra’iisal wasaaraha).
1. Shaqaalaha dowladda ee rayidka ah waxaa laga jarayaa ilaa 30%, tusaale ahaan shaqaalaha heerka (A) ee qaadan jiray $700 marka laga jaro casnshuurta waxay hadda qaadan doonaan $500 kaliya.
2. Waxay arrintan saameyn ku yeelan doonta saraakiisha ciidamada kala duwan ee dowladu siiso mushaarka.
3. Xildhibaanada Baarlamaanka waxaa casnshuur ahaan looga qaadayaa 18%, waxayna hadda qaadan doonaan $2500, halka ay qaadan jireen $3000.
4. Kharash maalmeedkii la siin jiray wasaaradaha oo kala duwanaa waxaa inta badan laga dhigay $3000, halkii ay hore u heli jireen $4800 iyo ka badan
5. Waxay kaloo wax ka bedelka xukuumadu dooneyso saameyn doonaa raashinka la siin jiray ciidamada.
Golaha wasiirada ayaa arrintan ansixiyay kadib markii uu madaxweynaha culeys ku saaray, wuxuuna sheegay in wixii hadda ka danbeeya la heli doono mushaarka ciidamada iyo shaqaalaha dowladda bil waliba dhammaadkeeda.
Lama oga sida arrintan u dhaqan geli doonto xilli miisaaniyadda 2015 ay ka harsan tahay 5 bilood oo qura, baarlamaankana laga doonayo inuu ogolaado wax ka bedelka la soo jeediyay, waxaase rajo xumo laga muujinayaa arrimaha maaliyadda dowladda Federaalka.
Galmudug oo beenisay in Ahlu suna kala wareegtay Degmada Caabudwaaq
Iyadoo maamulka degmada Caabudwaaq ay la wareegeen maleeshiyo taabacsan Ahlu suna ayaa madaxweyne ku xigeenka Galmudug Maxamed Xaashi Cabdi Carabeey oo shalay ka baxay magaalada Caabudwaaq intii aanu falkaasi dhicin wuxuu VOA-da Laanta Af soomaaliga u sheegay inaysan jirin cid kale oo maamusha degmada Caabudwaaq oo kaliya ay joogaan ciidamada Maamulka degmadaas,wuxuuna ku dooday inay taageersan yihiin Maamulka Galmudug.
Mudane Carabeey ayaa qiray in Ahlu sunna ay la wareegeen degaano u dhexeeya Dhuusamareeb iyo Xeraale, laakiin aysan qabsan Caabudwaaq. Wuxuu ku adkeystay in maamulka uu madaxweyne ku xigeenka ka yahay ee Galmudug uu yahay uu yahay midka sharciga ah ee ka jira Gobolada Gobolada dhexe.
Madaxweyne ku xigeenka Galmudug Maxamed Xaashi Carabey oo ka soo jeeda Waqooyiga Galgaduud wuxuu ku fashilmay inuu taageero buuxdo maamukiisa uga helo beeshiisa oo si weyn ugu kala qeybsan labada maamul ee Ahlu sunna iyo Galmudug iyadoo madaxweynaha Galmudug loo diiday inuu booqdo Caabudwaaq.
Ahlu suna oo la wareegtay Caabudwaaq & madaxdii Galmudug oo ka baxsaday magaalada
Kooxda Ahlu suna ee fadhigeedu yahay magaalada Dhuusamareeb ayaa maanta la wareegtay Saldhigga degmada Caabudwaaq kadib markii ciidamo kooxdan ka tirsan oo taabacsan madaxweynaha Ahlu Suna Sheekh Maxamed Shaakir ay galeen degmada.
Waanwaan ay wadeen odayaasha iyo waxgaradka Caabudwaaq oo ku saabsaneyd loolanka u dhaxeeya maamulka cusub ee Galmudug iyo kooxda Ahlu suna ayaa shaqeyn waayay, iyadoo odayaasha degaankaasi ay u diideen inuu socdaal ku yimaado Madaxweynaha Galmudug C/kariin Xuseen Guuleed.
Madaxweyne ku xigeenka Galmudug Maxamed Xaashi Carabey oo ka soo jeeda degaankasi dhowr maalmoodna ku sugnaa Caabudwaaq ayaa ka baxsaday Caabudwaaq waxyar ka hor intii aysan maleeshiyada Ahlu suna la wareegin saldhigga degmada, waxayna wararku sheegayaan inuu goor dambe gaaray Cadaado.
Arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii kooxda Ahlu suna ay dhowaan la wareegtay degaanada u dhaxeeya Cadaado iyo Caabudwaaq sida Xananbuuro, Mareergur iyo Bangeelle, waxaana isku dhac uu shalay ku dhex maray ciidamo uu watay taliyaha aagga 21aad ee ciidamada dowladda Sulub Axmed Diiriye iyo maleeshiyada Ahlu suna.
Ciidamo hore ugu sugnaa saldhigga degmada iyo xarumaha ciidamada degmada Caabudwaaq ayaa sidoo kale faarujiyay xarumahoodii kuwaas oo la sheegay inay taageersanaayeen maamulka Galmudug. Xaaladda Degmada ayaa kacsan iyadoo loolanka labada maamul qarka u saaran yahay inuu dagaal ka dhex abuuro dadka Caabudwaaq oo kala u kala qeybsan.
Ciidamada dowlada & AMISOM oo sheegay inay 48 saac ku qabsan doonaan Diinsoor iyo Baardheere
Ciidamada AMISOM ee ka kala socda Itoobiya iyo Kenya oo ay wehliyaan ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamulada degaanada ayaa diyaar garowgii ugu danbeeyay ku jira sidii ay kooxda Alshabaab ugala wareegi lahayeen laba degmo oo muhiim ah, kana kala tirsan gobolada Gedo iyo Bay taasoo qeyb ka ah howlgalka isku furka Jubbooyinka.
Ciidamada Itoobiya ayaa la sheegay inay ku dhow yihiin degaanka Raama-caddey oo 40 km u jira degmada Diinsoor, iyadoo qeyb kale oo ciidamadaas ka mid ahna ay jiho kale ka kulaalayaan Diinsoor, iaygoo ku sugan degaanka Safar-nooleys oo 30 KM u jirta degmada Diinsoor.
Ciidamo Itoobiyaan ah iyo kuwa Kenya ka socda ayaa iyaguna jihooyin kala duwan ku sii sinqaya degmada Baardheere oo wararku sheegayaan inay 30 KM u jiraan, waxayna wararkii ugu danbeeyay sheegayaan in Alshabaab ay qorsheyneyso inay ka baxdo degmooyinka weerarku ku socdo iyadoo markii hore isu muujisay inay difaaci doonto, balse waxay miinooyin badan dhigeen wadooyinka soo gala Baardheere oo hakiyy socodkii ciidamada.
Dadweyne fara badan ayaa ka qaxay degmooyinka Baardheere iyo Diinsoor oo noqday goobo cidlo ah oo haawanaya. Saraakiisha ciidamada dowladda ayaa sheegay in 48 saac ee soo socda ay gacanta ku dhigi doonaan labada degmo ee muhiimka ah Baardheere iyo Diinsoor oo muddo dheer ay Alshabaab gacanta ku hayeen.
Ra’iisal wasaaraha oo Muqdisho ku laabtay markii laga hor istaagay kulan uu la yeelan lahaa C/kariin Guuleed
Ra’iisal wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Cumar C/rashiid Cali ayaa galabta dib ugu soo laabtay magaalada Muqdish kadib markii uu muddo toddobaad ah ku suganaa degaanada Puntland oo wadahadal aan miro dhalin uu kula soo yeeshay madaxda maamulada Puntland iyo Jubba.
Fashilka ku yimid kulankii labaad ee labada dhinac ayaa dib u dhac ku keenaya dadaalkii uu wadya Ra’iisal wasaaraha oo horeba ay u diiday Puntland.
C/kariin Guuleed: “Galmudug waa kasoo gudubtay xilligii sacab lagu qarin lahaa”
Madaxwey aha Galmudug C/kariin Xuseen Guuleed oo ku sugan magaalada Gaalkacyo ayaa maanta ka hadlay bannaanbax balaaran oo dadweynaha Gaalkacyo ay ku soo dhoweeyeen Barxada Cabdulahi Ciise ee Magalaadaasi, wuxuuna sheegay inuu nabad ugu baaqayo Puntland iyo wadahadal uu ugu yeeray kooxda Ahlu sunna.
Sidee Madaxweynuhu u guddoomiyay shirkii Golaha Wasiirada ee Shalay?! (Faaqidaad Sharci ah)
Madaxweynaha dowlada Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shalay ku dhaqaaqay fal ugub ah oo ka baxsan awoodiisa sharciyeed kadib markii uu shir guddoomiyaya shirkii degdegga ahaa ee Golaha wasiirada yeesheen oo socday muddo ka badan 5 saacadood.
Madaxweynaha oo markii hore la sheegay inuu shirka Golaha Wasiirada u tegay kormeer ahaan. balse waxay xaaladu isu bedeshay inuu laf ahaantiisa la wareego guddoominta shirka oo waliba dood ku saabsan wax ka bedelka Miisaaniyadda 2015 u qeybiyo wasiirada ilaa markii danbe uu cod u qaado miisaaniyadda iyo wax ka bedelkeeda oo la sheegay in la ansixiyay. Waxaana la yaab lahay in xubnaha golaha wasiirada aanu midkoodna madaxweynaha u sheegin xaaladda uu ku dhex jiro iyo sharci darrada uu ku dhacay, iyadoo uu fadhiga markii hore guddoominayay wasiirka Cadaaladda maadaama ay maqan yihiin Ra’iisal wasaaraha iyo ku xigeenkiisa.
Shirkii shalay wuxuu noqon doonaa mid taariikhda galay iyadoo warbaahinta dowladda ay shaacisay “MADAXWEYNAHA OO GUDDOOMIYAHAY SHIRKII GOLAHA WASIIRADA”. Ka sokow go’aanada lagu gaaray wuxuu madaxweynuhu wuxuu faragelin ku sameeyay hay’adii fulinta ee dalka oo ay ahayd inuu ku dhowro kala madax bannaanashaha hay’adaha dalka ee fulinta iyo madaxtooyada, wuxuu kaloo falkiisu caddeyn u yahay in labadii awoodood ee fulinta iyo madaxtooyada uu isku qaatay madaxweynaha, iyadoo wasiir waliba xilkiisa uga baqayo inuu runta u sheego madaxweynaha ay ahayd inuu sharciga ilaaliyo balse nasiib darro hor boodaya.
Awoodaha madaxweynaha waxay ku xusan yihiin Dastuurka uu ku dhaartay, xilkiisuna kuma jirto inuu Hay’adda fulinta guddoomiyo.
Hoos ka akhri awoodaha iyo xilka madaxweynaha ee Dastuurku cayimay
Madaxweynuhu wuxuu u xil saaran yahay isku xirka hay’adaha dowladda iyo ilaalinta sharciga, inuu gudoomiyo Golaha wasiirada waxay la mid tahay isagoo guddoomiyay Baarlamaanka oo dabcan aanay sina u dhici karin, maadaama golahaasi uu yahay mid balaaran, waxaase muuqata in golaha wasiirada uu madaxweynuhu fududeystay iyagiina ay isaga raaceen rabitaankiisa.
Hay’adda fulinta ee xukuumadda iyo golaheeda wasiirada waxay leeyihiin awood iyo xilal uu dastuurku siinayo oo si cad u sheegaya howshooda.
Hoos ka akhri awoodaha iyo xilka Golaha wasiirada sida Dastuurka u qeexay:
Marka la isu eego labada awoodood waxaa muuqata in Golaha wasiirada ay leeyihiin gacanta sare oo dhammaan awoodaha fulinta ay iyaga oo kaliya leeyihiin, waxaana la yaab leh in shirkii golaha wasiirada ee shalay 19 July 2015 madaxweynuhu guddoomiyay looga doodayay arrinta Miisaaniyadda 2015 oo gebi ahaan ah howl ay si gaara u leeyihiin Golaha wasiirada sida ku cad qodobka 99-aad faqradiisa (d).
Dhacdooyinka noocan oo kale ah ee dadka oo dhami iska aqbalayaan ama la iska indha tirayo waxay nuxur beeliyeen sharcigii dalka, waxayna dowladnimadii dalka ka dhigeen mid hal qof ku kooban.
Maxkamadda Sare maxay u soo faragelisay Kiiska Cali Yare?
Qoraal shalay ksoo baxay xafiiska Guddoomiyaha Maxkamadda Sare Avv. Caydiid C/llaahi Ilko-xanaf ayaa lagu amray in si degdeg ah lagu sii daayo ninka lagu magacaabo Cali Cabdi Wardheere (Cali Yare) oo la sheegay in uu ku xiran Baarista Xisbiga, isla markaana hay’adda nabadsugidda ay sheegtay in loo heyso adeegsiga magacyada mas’uuliyiinta dowladda ee baraha bulshada ku xiriirto.
Warqad ay ku saxiixnaayeen Guddoomiye Ilko-xanaf iyo laba Garsoore oo kale ayaa lagu sheegay in xariga Cali Yare uu yahay mid aan sharci ahayn maadaama dalka aysan dalka ka jirin jirin xaalad degdeg ah oo uu Baarlamaanku ansixiyay. Wuxuuna qoraalkan ka danbeeyay codsi ay maxkamadda u qoreen qareenada u doodaya Cali yare oo kala ah Tahliil Xaaji Axmed iyo C/kariin Maxamed Axmed. Waxayna warqadu ku socotay xeer ilaalinta iyo nabad sugidda Gobolka Banaadir.
Waa markii ugu horeysay ee maxkamadda sare soo farageliso shaqsi u xiran dowladda iyadoo la ogyahay in boqolaal Soomaali ah sida Cali Yare oo kale ku jiraan Xabsiyada dowladda siiba kuwa nabad sugidda una baahan cid u dooda oo dacwad xalaal ah ku soo oogta ama xoriyadooda dib ugu celisa.
Maxkamadda sare waxaa looga fadhiyaa inay tagto Xabsiga baarista xisbiga oo ay soo eegto xaaladda dadka halkaasi ku xiran iyo wax loo heysto intii ay ka jawaabi lahayd oo qura kiis qura oo ka mida boqolaal kiisa oo caadi ka noqday Muqdisho.
Si kastaba aha ahaate waa tallaabo soo dhoweyn mudan qoraalka kasoo baxay Maxkamadda sare oo caddeynaya sida dadka la isaga xirto Muqdisho inaysan sharci ahayn, waxaase xusid mudan in mas’uuliyadda saaran maxkamadda ay ka weyn tahay u doodista shaqsi kaliya.
Waxaa muuqata in Maxkamadda sare ee dalka ee uu hogaamiyo Ceydiid C/llaahi ay kaliya wax ka tiraahdo kiisaska dadka magaca leh iyo kuwa awooda inay qareeno waaweyn qabsadaan balse ay gabtay dadka faraha badan ee shacabka ah oo tacadiyadu ku socdaan. Waxaase la kala ogaan doonaa in dalku sharci ka jiro oo amarka maxkamadda sare soconayo iyo in kale.
KASHIFAAD: Musuqmaasuqa ka dhex jira Wasaaradda Warfafinta Somaliya (Q.2aad – Akhriso Dokumenti Sir ah)
Wasaaradda Warfaafinta, dhaqanka iyo dalxiiska dowladda Soomaaliya oo ka mida wasaaradaha ugu musuqmaasuqa badan sida lagu caddeeyay qormadii koowaad ee Goobjooge.com ayaa mar kale muujisay inaysan diyaar u ahayn sixitaanka lacagaha wasaaradaasi ay soo xareyso ee ka yimaada Iidhehyada laga baahiyo Radio Muqdisho iyo TV-ga Qaranka ee SNTV. Arrintan ayaa soo baxday markii Agaasimaha maamulka iyo lacagta ee Wasaaradda Xasan Samatar Cabdi uu isku dayay inuu fuliyo amar Agaasimaha guud ee wasaaradaasi bixiyay oo ahaa in la dhimo iidhehda faraha badan ee ka baxday warbaahinta qaranka, hantida kasoo xarootana lagu shubo Wasaaradda Maaliyadda.
Sida agaasimaha maamulka iyo lacagta ee wasaarada Warfaafinta ku caddeeyay qoraal uu u kala diray madax kala duwan waxaa arrintan ka hor yimid madax waaxeed wasaaradda ka tirsan oo qaabilsan shaqaalaha, suuq-geynta iyo xiriirka macaamiisha oo lagu magacaabo Fartuun Xasan. Mas’uulkan ma aha oo kaliya inay ka been sheegtay qiimaha laga qaado iidhehyada ka baxa Warbaahinta Qaranka ee waxay sidoo kale qarisay iidhehyo badan oo laga baahiyo Radiyo Muqdisho iyo TV-ga Qaranka.
Goobjooge.com oo hore u soo bandhigay musuqa ka dhex jira Wasaaradda Warfaafinta Soomaaliya, waxay idin soo gudbineysaa Dokumenti qarsoodi ah oo ku saabsan sida wasaaradani ugu baahay musuqa oo hantidii qaranka dad gaar ahi u lunsadaan, iyadoo laga cabsi qabo inay ku lug yeeshaan madax sare oo qoraalka soo socda aan lagu sheegin.
Akhri: KASHIFAAD: Musuqmaasuqa ka dhex jira Wasaarada Wafaafinta Soomaaliya (Qeybtii koowaad)
HOOS KA AKHRI QORAALKA AGAASIMAHA MAAMULKA & LACAGTA EE WASAARADDA WARFAAFINTA
Baarlamaanka Federaalka ayaa maanta kulan ku yeelanaya xaruntiisa Muqdisho kadib markii ay fasaxii ciidul fitriga ka soo laabteen, waxaana la filayaa in kulanka maanta lagu dhaariyo xubnaha Guddiyada doorashooyinka iyo Xuduudaha oo dhowaan ay ansixiyeen Baarlamaanka.
Guddiyada Qaran ee Doorashooyinka iyo Xuduudaha ayuu baarlamaanku cod qarsoodi ah ku ansixiyay, waxaana kasoo horjeestay oo sheegay inaysan aqoonsaneyn maamulada Puntland iyo Juba oo ku doodaya inaan lagala tashan.
Guddiyadan oo muhiim u ah hiigsiga 2016 waxaa dhaqaalaha ay ku shaqeeyaan bixinaya beesha caalamka, waxayna warbixinta siinayaan oo la xisaabtamaya baarlamaanka Soomaaliya.
Shirkii la filayay inuu maanta qabsoomay ayaa baaqday kadib markii ay soo xaadiri waayeen tiro xildhibaano ah oo kooramka buuxsami waayay, taasoo keentay inay dib u dhacdo dhaarintii guddiyada doorashooyinka iyo xuduudaha.
XOG: Cumar C/rashiid & C/kariin Guuleed oo ku sugan Gaalkacyo & kulan dhex mari doona
Madaxweynaha Galmudug C/kariin Xuseen Guuleed iyo Ra’iisal wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ayaa caawa ku wada sugan magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug oo labadaba lagu soo kala dhoweeyay dhinacyada Koonfureed iyo Waqooyi ee magaaladaasi oo ay ka kala taliyaan Galmudug iyo Puntland.
Wafdiga C/kariin Guuleed ayaa socdaal dhulka ah ku soo maray ilaa Cadaado, waxaana galabta si diiran oo xamaasad leh loogu soo dhoweeyay Gaalkacyo iyadoo ay ka hortageen dadweyne iyo mas’uuliyiin fara badan.
Dhinaca kale wafdi uu hoggaaminayo Ra’iisal wasaaraha Soomaaliya Cumar C/rashiid Cali oo maalmahan ku sugnaa degaanada Puntland ayaa iska caawa soo gaaray magaalada Gaalkacyo oo si diiran loogu soo dhoweeyay, iyadoo la dejiyay Hotelka Sugulle ee magaaladaasi. wuxuuna kulamo la leeyahay madaxda Gobolka Mudug ee Puntland.
Wararka laga helayo Gaalkacyo ayaa sheegaya in Ra’iisal wasaare Cumar C/rashiid iyo C/kariin Guuleed ay berito kulan ku yeelan doonaan Gaalkacyo kaasoo daba jooga socdaalkii uu Ra’iisal wasaaraha ku tegay Cadaado intii aanu tegin Puntland, waxaana kulankaasi ay labada dhinac uga hadlayaan waanwaan uu Ra’iisal wasaaraha ka dhex waday Galmudug iyo Puntland oo u muuqata inay fashilantay.
Waxaa hore u jiray qorshe uu waday Cumar C/rashiid oo ahaa in Galmudug ka tanaasusho qodobka sheegaya in xuduudeeda ay tahay Gobolka Nugaal, halka Puntland laga doonayay inay ogolaato maamulka Galmudug lana shaqeyso, taasoo ay ku gacan serytay Puntland, lamana oga tallaabada xigta ee Galmudug iyo dowladda Federaalku qaadi doonaan.
C/raxmaan Faroole oo Hargeysa lagu soo dhoweeyay (Ujeedada socdaalkiisa)
Madaxwaynihii hore ee dowlad goboleedka Puntland C/raxmaan Maxamed Farole ayaa maanta lagu soo dhaweeyay magaalada Hargaysa ee xarunta maamulka Somaliland isagoo ka soo anbaxay dalka Australia oo uu degan yahay.
Waxaa Faroole Hargeysa ku soo dhoweeay salaadiinta, odayaal dhaqan iyo mas’uulihiin, waxaana ujeedada socdaalkiisa uu yahay tacsi ku saabsan xaaskiisa oo ku geeriyootay magaalada Garowe.
Faroole ayaa la sheegay in ehelka ay xigtada yihiin uu ka tacsi gudanayo maadama geerida xaaskiisa ay ahayd mid si murugo leh ku dhacday. Waxaa lagu wadaa in kadib socdaalkiisa Hargeysa uu Dr. Faroole tago magaalada Garowe ee xarunta Putland.
Madaxweynaha oo Golaha Wasiirada kala hadlay arrin ku soo fool leh
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta ka qeyb galay shirkii Golaha wasiirada oo ahaa mid degdeg la isugu yeeray golaha wasiirada oo aan caadi ahayn, waxaana la sheegay inuu shir guddoomiyay madaxweynaha.
Kulanka ayaa looga dooday qorshaha dowladda ee dib u eegista miisaaniyadda 2015 iyo shirka lagu wado inuu ka dhaco Muqdisho dabayaaqada bishan ee u dhexeeya Soomaaliya iyo beesha caalamka (High Level Partnership Forum HPLF). Shirkan oo maamulada dalka ka jira kasoo qeyb galayaan ayuu madaxweynuhu Golaha wasiirada ku booriyay inay doorkooda qaataan oo qorshe cad la yimaadaan.
Madaxweynaha ayaa u sheegay golaha wasiirada in loo baahan yahay in Golaha Wasiirrada ay la yimaadaan siyaasad horumarsan oo lagu dhaqaajiyo barnaamijyada horumarinta ee dowladu wado, wuxuuna ku booriyay inay wada shaqeeyaan.
Xukuumadda Soomaaliya ayaa herdan kula jirta maamul goboleedyada dalka ka jira oo iyagu doonaya inay dowladda kala wareegaan arrimaha hiigsiga cusub.
Xubnaha golaha wasiirada ayaa lagu ansixiyay talo soo jeedinta barnaamijka dib u eegista miisaaniyadda dowladda ee sannadka 2015.
AMISOM and Somali National Army launch military offensive against Al Shabaab in Bay and Gedo regions
19th July 2015- A military offensive against Al Shabaab in the Bay and Gedo regions of Somalia, codenamed ‘Operation Jubba Corridor’ is underway with the aim of flushing out the terrorist group from the rural areas.
The operation being undertaken by African Union Mission in Somalia (AMISOM) and Somali National Army (SNA) troops follows recent successful operations that have seen the militants pushed out of most regions of the country.
AMISOM and SNA troops started the operation in Qansax Dheere and Fafadun on Friday. The operation will ensure that all the remaining areas in Somalia will be liberated and peace restored.
AMISOM Deputy Force Commander Operations and Plans Major General Mohammedesha Zeyinu says the aim of the operation is to eliminate Al Shabaab in the few rural areas it still occupies.
“This operation seeks to clear Main Supply Routes to facilitate delivery of humanitarian aid to the population and flash Al Shabaab from all the said areas, ensuring full control by the Federal Government of Somalia,” he said.
Maj. Gen. Mohammedesha emphasized AMISOM’s commitment in offering support to the Somali National Army and ensuring peace is fully restored in Somalia.
Diyaaradii Axmed Madoobe ka qaaday Garowe oo cilad ku qabsatay hawada & Wafdigii oo dib loo celiyay
Diyaaradii uu manta duhurnimadii garonka magaalada Garowe ka raacay hogaamiyaha maamulka Jubba Axmed Maxamed Islaan (Axmed Madoobe) ayaa dib ugu laabtay garoonka ay ka duushay kadib markii muddo 25 daqiiqo ay hawada ku jirtay iyadoo ku sii jeeday magaalada Kismaayo.
Wararka Garowe laga helayo ayaa sheegaya in Wafdiga Axmed Madoobe dib loogu celiyay Garoonka Garowe markii duuliyaha diyaaradda uu sheegay inay cilad soo wajahday diyaaradda oo aanu tegi karin Kismaayo.
Axmed Madoobe iyo xubnihii la socday ayaa la sheegay inay khalkhal weyn la kulmeen xaaladuna ku cuslaatay, basle si nabad ah ay dib ugu noqdeen Garowe, halkaasoo ay ku xayiran yihiin iminka iyagoo ka aamin baxay diyaaradda ciladowday oo qalqaalo loogu jiro diyaarad kale sidii loogu soo diri lahaa.
Maamulka Ahlu suna oo si kulul u beeniyay in la xiray madaxweyne Sheekh Axmed Shaakir
Maamulka Ahlu suna ayaa si kulul u beeniyay warar la isla dhex marayay labadii maalmood ee ugu danbeysay oo sheegayay in la xiray madaxweynaha Ahlu suna ee Gobolada dhexe Sheekh Axmed Shaakir Cali Xasan.
Mas’uul Ahlu suna uga hadlay Dhuusamareeb ayaa saxaafada u sheegay inay been abuur tahay wararka la faafiyay ee ku saabsan xariga madaxweynahooda wuxuuna cadeeyay inuu ku sugan yahay Dhuusamareeb oo dadkiisa la ciiday soona saaray hambalyadii ciidul fitriga ee Sabtidii laga ciiday degaanada Ahlu suna.
Wuxuu ugu baaqay dowladda federaalka inay sharciga keento dadkii faafiyay wararka been abuurka ah ee ku saabsan madaxweynaha Sheekh Shaakir.
Hore ayay qaar kamida warbaahinta u shaaciyeen warka xariga Sheekh Shaakir oo ay sheegeen inay ciidamo itoobiyaan ah xabsi geliyeen, iyadoo aanay jirin cid xaqiijisay.
AMISOM oo ku dhawaaqday inuu bilowday howgal weyn oo Alshabaab looga xoreynayo Bay iyo Gedo
Howgal milateri oo kooxda Alshabaab looga xoreynayo gobolada Bay iyo Gedo ayaa si rasmi ah u bilowday sdia aya shaaciyay AMISOM oo qoraal kasoo saartay xarunteeda Muqdisho. Howlgalkan ayaa loogu magic daray howlgalka isku furka jubbooyinka ‘Operation Jubba Corridor’, waxaana ujeedkiisu yahay in Alshabaab looga eryo degaanada Miyiga.
Howlgalka ayaa la sheegay inay si wadajir ah u wadaan AMISOM iyo ciidamada dowladda Federaalka, iyadoo horumar laga gaaray bilowgii howlgalka sida lagu sheegay warka AMISOM ka soo baxay.
Howlgalka ayaa Jimcihii ka bilowday Qansaxdhere iyo Faxfaxdhun, iyadoo AMISOM ay sheegeyso in dhulka gacanta ugu jira Alshabaab laga xoreyn doono laguna soo celin doono nabad.
Talioye ku xigeenka howgallada AMISOM General Mohammedesha Zeyinu ayaa sheegay in ujeedada howlgalka ay tahay sidii Alshabaab looga nadiifin lahaa dhulka miyiga ah ee ay heystaan, wuxuuna intaas ku daray in howlgalkan lagu nadiifin doono wadooyinka waaweyn si gargaar loo gaarsiiyo dadka ayna dowladda Federaalka gacanta ugu qaban lahayd degaanadaasi.
Dagaal dhex maray Ahlu Suna & Ciidamada Galmudug ku dhex maray Galgaduud
Wararka laga helayo gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in dagaal culus uu dhex maray maleeshiyada Kooxda Ahlu suna iyo ciidamada dowlada ee taageersan Maamulka Galmudug kadib markii maleeshiyo kooxda Ahlu suna ka tirsan ay jidka u galeen kolonyo uu la socday Taliyaha ciidamada qeybta 21-aad ee Galgaduud Sulub Axmed Diriye.
Maleeshiyada Ahlu sunna ayaa weerarka ay ku qaaday taliyahan iyo ciidamada oo ku socday Caabudwaaq kana yimid Cadaado waxaa ka dhashay qasaare badan oo ciidan, waxaana taliyaha u suuragashay inuu is difaaco oo uu gaaro Caadbudwaaq.
Halka weerarka ka dhacay ayaa lagu magacaabaa Laandeere waxayna u dhaxeysaa jidka la isaga socdaalo Cadaado iyo Caabudwaaq. Wararkii ugu danbeeyay ayaa sheegaya in maleeshiyada Ahlu suna ay ku khaldameen taliyaha ay weerarka ku qaadeen.
Shirkii magaalada Garowe uga socday dowlada Federaalka Soomaaliya iyo maamulada Puntland iyo Juba ayaa laga soo saaray war-murtiyeed 4 qodob oo aan lagu soo qaadin khiaafkii u dhaxeeyay labada dhinac, balse looga hadlay arrimo guud oo dib u heshiisiin iyo wada-tashi ku saabsan.
War-murtiyeedka waxaa ka muuqda in loo diyaariyay si loogu ogolaado madaxda shirtay inay kala tagaan iyadoo aan xaqiiqada ah fashilka ku dhacay aan la soo qaadin.
Golaha Wasiirada xukuumadda Soomaaliya oo shir degdega ku leh Magaalada Muqdisho
Shir degdega ayaa goor dhoweyd la isugu yeeray Golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya iyadoo shirkaasi la sheegay inuu ku saabsan yahay arrimaaha miisaaniyadda 2015 ee dowladda Soomaaliya oo dib u eegis lagu sameynayo.
Shirkan ayaa waxaa guddoominaya kusimaha Ra’iisal wasaaraha ahna wasiirka Cadaaladda C/llaahi Jaamac Ilka-jiir, iyadoo Ra’iisal wasaare Cumar C/rashiid ku sugan yahay Gobolka Bari, halka Ra’iisal wasaare ku xigeenka la sheegay inuu isaguna ka maqan shirka.
Shirkii toddobaadlaha ahaa ee Khamiis waliba golaha wasiirada yeelan jireen ayaa baaqday toddobaadkii hore, waxaana golaha wasiirada shirkooda maanta laga sugayaa wasaaradda maaliyadda inay hor dhigto wax ka bedel lagu sameeyay miisaaniyadda sanadkan 2015.
1...1,0541,0551,056...1,108Page 1,055 of 1,108